Dhaawicii Dhuusamareeb oo loo duuliyay Nairobi iyo Addis Ababa - Sabahionline.com
Dhaawicii Dhuusamareeb oo loo duuliyay Nairobi iyo Addis Ababa
Dhowr ka mida dadkii ku dhaawacmay qarixii is-miidaaminta ahaa ee Dhuusamareeb ayaa Talaadadii loo duuliyay Itoobiya si halkaa loogu soo daweeyo, iyada oo qaar kalena la qorsheeynayo in la geeyo Nairobi, sidaana waxa Arbacadii (2-dii May) sheegay Raadiyo Bar-Kulan oo ay QM maal-galiso.
Madaxda Dhuusamareeb oo boorka ka jafay ammaanka magaaladaa ka dib weerarkii al-Shabaab
Dhibbanayaasha ayaa la sheegay in ay xaaladdoodu halis tahay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay makhaayad, halkaa oo ay xildhibaannada maxalliga uhu ay kulan kula lahaayeen muwaadiniinta degaanka. Diyaarad ayaa dadka dhaawaca ah ka qaadday Guriceel una duulisay Addis Ababa, sida uu sheegay guddoomiyaha degmada Cismaan Ciise Nuur.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Axmed Cabdisalaam, xildhibaan Xuseen Samatar iyo xildhibaan Cabdirisaaq Isaaq Biixi ayaa ka mid ah dadka lagu soo daweeynayo Itoobiya.
Shan kale oo ka mida dhaawaca ayaa loo duulin doonaa Nairobi si halkaa loogu soo daweeyo.
Weerarkan oo ay ku dhinteen siddeed qof ayaa waxa mas’uuliyaddiisa sheegtay kooxda al-Shabaab.
Tani waxay cashir u noqon kartaa taageerayaasha daaquudka